Izisetshenziswa Ezingcono Kakhulu Zokuqeda Amasu Wakho Wokubloga Wenkampani | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 13, i-2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukulungiselela ukukhuluma ne I-SharpMinds iqembu mayelana neBlogging Corporate, ngidonse ndawonye izinsizakusebenza ezimbalwa ezivela kumasayithi amaningi. Ngingakhululeka uma ngingababongi esidlangalaleni. Futhi, nginikezela ngesibonelelo kubantu ngezinsizakusebenza kanye nezixhumanisi ezibuyela kulawa mawebhusayithi abantu.
Ukukutshela iqiniso, esikhathini esedlule bengimelene nokubhuloga ezinkampanini njengecebo. Empeleni, ngalibhala leli gama ukuvimba ngoba lokho kuvame ukwenzeka lapho uzama ukwenza amasu noma ukukalwa kubhulogi. Kubuyela emuva kuwe. Ngibone izibonelo eziningi kakhulu zokubloga okuhle ezinkampani ukuthi zingaphikisani nakho. Izinkampani zizobe zenza iphutha uma zingasebenzisi le teknoloji kuhlelo lwazo lonke lokuxhumana.
Kungani Ubukhona Bokubloga Kwebhizinisi?
Muva nje ngiyaqala ukubona izinkampani eziningi ezikwazisayo ukuthi yikuphi ukubhuloga okunikeza izinkampani zazo namakhasimende abo, ikakhulukazi:
Inikeza ukuvezwa kwenkampani nabasebenzi bayo njengabaholi abacabangayo embonini yabo.
Kuthuthukisa ukubonakala kwenkampani. Eqinisweni, ngokwezibalo ezithile, i-87% yokuvakashelwa okuthile kumawebhusayithi ezinkampani ikwenza kube khona ngamabhulogi.
Inikeza abasebenzi bakho, amaklayenti, namathemba ngobuso bomuntu enkampanini yakho.
Isebenzisa ubuchwepheshe be-blogosphere nobuchwepheshe bokusesha ukuthuthukisa inkampani yakho ukutholakala ku-inthanethi.
Ukuze wenze ngempumelelo, kunezeluleko ezithile ezinhle enetheni. Nazi izibonelo:
Cabanga ngokuhlanganisa ikomidi lebhulogi elengamele amabhulogi, okuqukethwe, elicindezela ukubamba iqhaza, futhi livume amabhulogi enkampani.
Khuthaza ama-blogger akho ukuthi afunde ama-blog futhi athole izeluleko zawo kuma-blog. Izinsizakusebenza zokumaketha nezokukhishwa kwezindaba zibhekwa njengezingezona ezomuntu futhi zibukelwa phansi ngama-blogger - imvamisa kungenxa yokujikeleza, ukungathembeki nokuqukethwe okuvunyelwe ngaphambilini.
Chaza isihloko esigxile kubhulogi yakho, inhloso, nombono wakho wokugcina. Dlulisa lokhu kubhulogi yakho ngempumelelo bese uthola ukuthi ungayilinganisela kanjani impumelelo yakho.
Yenza okuthunyelwe kwakho kube ngumuntu bese uyayixoxa indaba. Ukuxoxa izindaba kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokufundisa abantu ngomyalezo wakho wokuthunyelwe. Ababalisi bezindaba abakhulu banqoba njalo.
Bamba iqhaza bese ujoyina abafundi bakho. Vumela ukuthi bathonye futhi baphendule ngezihloko zakho futhi ubaphathe ngenhlonipho enkulu. Bamba iqhaza kwamanye ama-blog bese uxhuma kuwo. Kuyinto 'indawo yethonya' okufanele uxhume kuyo.
Yakha ukwethembana, igunya nomkhiqizo wakho. Phendula ngokushesha nangempumelelo. Njengoba wakha ukwethembana, injalo inkampani yakho.
Yakha umfutho. Amabhulogi awekho mayelana nokuthunyelwe, akhuluma ngochungechunge lokuthunyelwe. Amabhulogi aqinile akha idumela nesikweletu ngokucindezela okuqukethwe okubalulekile njalo.
Nawu umbono wami we-eksisi engu-3 isu elihle lokubloga lihlanganisa, i- Unxantathu wokubhuloga:
Omunye umzila obuyela emuva uphawule ngokuthunyelwe ukuthi idizayini ibilahlekile kucebo lilonke. Lapho sikhuluma ngayo Amasu Okubloga Kwebhizinisi, Ngikholelwa ukuthi ukwakheka kubaluleke kakhulu - kepha kunqunywe kusengaphambili yi-Marketing. Ngingathemba ukuthi inkampani seyivele ine-web design enhle nobukhona ngaphambi kokungena kubhulogi. Uma kungenjalo, bakungeza kangcono ohlwini!
Yiziphi Izingozi ezikhona?
Emhlanganweni weklabhu yezincwadi ongeyona yakamuva, sibuze omunye wababekhona, ummeli, ukuthi yiziphi izimiso zomthetho maqondana nokubloga kwabasebenzi. Uthe empeleni bekuyingozi efanayo naleso sisebenzi esikhuluma kwenye indawo. Eqinisweni, izincwadi eziningi zezisebenzi zihlanganisa okulindelwe yizenzo zabasebenzi. Uma ungenayo incwadi yesisebenzi ehlanganisa indlela yokuziphatha elindelekile yabasebenzi bakho, mhlawumbe kufanele! (Akunandaba nokubhuloga).
Nasi isithenjwa esimnandi kufayela le- OKWENZIWE NOKUNGENZIYO kokubhuloga ngokombono osemthethweni.
Ezinye izinto ezengeziwe zokuxoxa:
Uzobhekana kanjani nokugxekwa, izingxabano ezingezinhle, kanye nokuphawula? Kuyalulekwa ukusetha okulindelwe ngaphambili kokuthi amazwana azolungiswa kanjani futhi amukelwe kubhulogi yakho. Ngingakhuthaza inqubomgomo yokuphawula nganoma iyiphi ibhulogi yebhizinisi.
Uzoqinisekisa kanjani ukulawulwa komkhiqizo? Awudingi ama-blogger akho adidizela iziqubulo, ama-logo, noma izwi lomkhiqizo wakho. Kwenze ususe izandla.
Uzobhekana kanjani nababhlogi bakho abangakhiqizi? Yenza ukuthi ama-blogger akho amukele inqubomgomo ngaphambi kokuthi ukubamba iqhaza kungabi yisibopho kuphela, kepha ukuthi ukubuyela emuva kuzobabizela ukuvezwa. Banikeze ibhuthi! Ukulondoloza ukukhishwa okungaguquguquki kwezihloko kuyisihluthulelo kunoma yiliphi isu lokubhuloga.
Uzobhekana kanjani nokuvezwa kwempahla ebhaliwe esemqoka ebhizinisini lenkampani?
Izincwadi Zokufunda Esihlokweni:
Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies - Kubhalwe yimina!
Incwadi Yokubloga Kwebhizinisi: Impela Konke Okudingeka Ukwazi Ukuze Ukulunge.
Abomdabu Bedijithali: Ukuqondiswa Kwebhizinisi Manje: Okungokwemvelo, Okuzulazula, Nokuhlala Kushintsha.
Izingxoxo Ezinqunu: Amabhulogi ayishintsha kanjani indlela amabhizinisi akhuluma ngayo namakhasimende.
Iseluleko Sokubloga Nezinkampani
Yonke imininingwane engiyihlanganise kulokhu okuthunyelwe iphefumulelwe ngesinye sezixhumanisi eziningi ezingenhla noma kulolu hlu olungezansi. Kwakuningi okuthunyelwe okukhulunywe ngemininingwane lapha. Ngiqoqe imininingwane eminingi engingayenza futhi ngazama ukukuhlanganisa kokuthunyelwe okukodwa okunganikeza ukubuka konke okuhle kwemibono yochwepheshe abaningana ngamasu wokubloga ezinkampani. Ngiyethemba abanikazi balawa mabhulogi bayakwazisa - bafanelwe yilo lonke udumo ngalokhu okuthunyelwe!
Ngingakhuthaza noma ngubani ovakashelayo ukuthi achithe isikhathi kwelinye lalawa mabhulogi. Ziyizinsizakusebenza ezingakholeki!
Ungaqala kanjani iBlog
Ukutadisha Impumelelo Yokubloga eNyakatho-mpumalanga Yunivesithi
Omakhelwane Bomhlaba Wonke
I-Diva Marketing Blog
Ukudala Abasebenzisi Abathandekayo
Izibonelo Zebhulogi Lenkampani
Lokhu okuthunyelwe ngeke kuphelele ngaphandle kokunikeza okunye Ukubhuloga Kwebhizinisi izixhumanisi. Ezinye zikhona isikhulu amabhulogi ezinkampani kepha ngicabanga ukuthi kubalulekile ukubheka okungavumelekile amabhulogi ezinkampani nawo. Inikeza ubufakazi bokuthi uma uthatha isinqumo sokungavumi ukubhuloga mayelana nenkampani yakho noma uhlobo lomkhiqizo, omunye umuntu angahle!
Amabhulogi wenethiwekhi kaMicrosoft Developer
I-Google Blog esemthethweni
Ama-Matt Cutts: Amagajethi, i-Google ne-SEO
Ibhulogi ye-DreamHost engavumelekile
Kusuka Lapho Ngihlala Khona
I-Yahoo Search Blog
Ukwenza Ukusebenza Kokubhuloga Okubumbene
Amabhizinisi nabathengi bacwaninga ukuthenga kwabo oku-inthanethi okulandelayo ngokusebenzisa okuqukethwe namabhulogi ezinkampani ahlinzeka lokho okuqukethwe. Lokho kusho, kunezinyathelo okufanele uzithathe ukuze ulungiselele ipulatifomu yakho (ngokujwayelekile i-WordPress) kanye nokuqukethwe kwakho. Uma ukhipha ukhaphethi obomvu ku-Google, bakhomba okuqukethwe kwakho futhi bandise ukufinyelela kokuqukethwe kwakho kakhulu. UBryant Tutterow ubhale uchungechunge lokwandisa ibhulogi yakho - qiniseka ukuthi uyayifunda bese ushaya ucingo Highbridge uma udinga usizo.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuphawula futhi ungeze izixhumanisi zakho ze-Corporate Blogging Links!
Tags: ibhulogiimihlahlandlela yokubhulogaizinsiza zokubhulogaukubhuloga ezinkampaniizibonelo zokubloga ezinkampaniukubhuloga ezinkampani kwama-dummitesizinkomba zokubloga ezinkampaniamasu wokubloga ezinkampani
Mar 13, 2007 ku-9: 46 PM
ngiyabonga ngokukhomba isifundo sempumelelo sokubhuloga. Njengomunye wababhali ababili abaphambili besifundo, bekuyinjongo yethu ukusiza umphakathi ngamathiphu athile ekubhuleni impumelelo.
Mar 13, 2007 ku-10: 15 PM
Kuyisifundo esihle. Ngiye ngayibhekabheka kodwa angikwazi ukulinda ukumba kuwo ujule kakhulu. Wenze umsebenzi omuhle ngokunikeza lokhu! Wenze kahle!
Mar 14, 2007 ku-1: 57 AM
Cabanga ngokuhlanganisa ikomidi lebhulogi […] eligunyaza amabhulogi enkampani.
Ngakho-ke ngokuyisisekelo ibhulogi yebhizinisi ingaba iqoqo lansuku zonke / lamasonto onke lenkulumo yokumaketha? Njengoba usho wena:
Izinsizakusebenza Zokumaketha Nokukhishwa Kwezindaba […] zibukelwa phansi […] ngenxa yokuqukethwe okugunyazwe ngaphambilini […].
Ngicabanga ukuthi ngaphandle kokuthi uzimisele ukuvuleleka futhi ungamane ususe amazwana amabi, inkampani ingahle inamathele kucebo lakho lakudala lewebhu. Njengoba nje isu lokuthuthukisa izinga lokusesha lizokwembulwa linjalo nje.
Mar 14, 2007 ku-2: 06 AM
Ekufundeni kwesibili ukuphawula kwami ​​kokugcina bekubonakala kukubi impela. Kwakungeyona inhloso leyo. Okuthunyelwe okuhle okubhalile, uDouglas.
Bengimane ngiveza ukuthi inkampani kufanele ibone ibhulogi njengengaphezulu nje kwenye ithuluzi lokumaketha. Kuyindlela eqonde ngqo kumakhasimende, kepha kuphela uma isetshenziswa a) ngokusobala futhi b) njengethuluzi lokuxhumana lezindlela ezimbili.
Mar 14, 2007 ku-6: 44 AM
Angizange ngikuthathe kabi, Martin. Ngivumelana nawe… Angicabangi ukuthi iKomidi leBhulogi kufanele livume konke okuqukethwe - kodwa ngicabanga ukuthi ikomidi kufanele lithathe isikhathi ukuqinisekisa ukuthi amabhulogi ahlala kokuqukethwe, ahlinzeka ngamathiphu nempendulo, futhi agcina umfutho.
Ngiyavuma - uma ikomidi le-blog libuyekeza, lihlela, futhi libuyekeza okuqukethwe - ibhulogi izolahlekelwa ukuthembeka nokufundwa kwayo ngobusuku obubodwa. Ngizoqiniseka ukukucacisa lokho enkulumweni yami.
Ngiphinde ngiyavuma… uma uqhubeka uhlanganisa ukumaketha kanye ne-PR spin njengengxenye yecebo lakho lokubloga, ungahle ugcine iwebhusayithi!
Mar 14, 2007 ku-8: 18 PM
UDoug - okuthunyelwe okuhle! Ngisebenza ekwakheni ibhulogi yebhizinisi okwamanje futhi ngithole izinsiza eziningi engizisebenzisa kulokhu okuthunyelwe. Umsebenzi omuhle - ngiyabonga!
Mar 14, 2007 ku-8: 25 PM
Ngiyabonga kakhulu, Patrick! Ngine- thwebula futhi, uma ungathanda ukuyisebenzisa. Ngisanda kukubeka namhlanje kusihlwa (ngemuva kokuphrinta isitaki ku Ama-Kinkos okwakusasa)
Jun 11, 2007 ku-11: 11 PM
Benginelukuluku lokuthola ikhophi eqinile noma okuthile engingakuprinta kulolo cwaningo. Kuyathakazelisa kimi ukukhulisa lokhu namakhasimende.
Ngicabanga ukuthi elinye lamakhasimende ami amakhulu lingakha "ukuvimba"
Dec 13, 2007 ngo-10: 05 PM
Kungakuhle uma ezinye zezibonelo zebhulogi ezinkampani zivela ezinkampanini ezingezona ezobuchwepheshe.
Dec 14, 2007 ku-2: 54 AM
Impendulo enhle leyo, yiu! Ngidinga kakhulu ukudonsa ezinye izibonelo. Ngicabanga ukuthi kukhona ithoni enkampanini yezokuvakasha.
Aug 6, 2015 ku-10: 57 AM
Ukubloga ezinkampanini njengecebo kuwumqondo omuhle kakhulu ngoba ..
Esikhundleni sokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhuthaza ibhizinisi, kufanele siqale ukwakha ibhulogi ebandakanya izinto eziningi ezifana nokubhala izindatshana eziheha umphakathi noma iklayenti elingahle libe khona, ukukhetha okuyinhloko kwezihloko ezisematheni futhi okubaluleke kakhulu ukuhlinzeka ngendatshana ebalulekile abafundi.
Lokhu kuzokusiza ukuthi uhlale isikhathi eside emakethe futhi kuthuthukise ibhizinisi lakho.
ISkytech - iBlogger evela eMalaysia